Iran: Nitokona Ny Mpiasa Noana An’aliny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jolay 2017 18:55 GMT
Nanomboka nitokona tamin'ny herinandro lasa ny mpiasa an'arivony tsy nandray karama tao amin'ny orinasa mpanodina siramamy Haft Tapeh ao Shoush any amin'ny faritanin'i Khuzestan any Iran . Nandefa mpitandro filaminana ny governemanta mba hampiasa famoretana tamin'ireo mpiasa, kanefa mbola nitohy hatrany ny fitokonana. Bilaogera maro no nitatitra ny hetsika sy ny tantara hafa mifandray amin'ny zava-sarotra iainan'ireo mpiasa mpikatroka .
Nilaza [Fa] ireo Kaargar (midika hoe mpiasa) fa nanomboka ny fitokonana tamin'ny asabotsy 27 Septambra ny mpiasan'ny orinasa mpanodina siramamy Haft Tapeh an'arivony any amin'ny faritanin'i Khuzestan. Nilaza ihany koa ny bilaogy fa ny hoe “noana ny mpiasan'ny Haftapeh” no iray amin'ireo teny fanevan'ny mpiasa tsy nandray karama. Manodidina ny 3000 ny isan'ny mpiasa hoy ny bilaogera ary maniry ny hanao fihetsiketsehana eo anoloan'ny biraon'ny governora izy ireo kanefa nanakana azy ireo ny polisy .
Nanoratra ny bilaogera fa efa nitokona ny mpiasan'ny Haft Tapeh teo aloha ary tsy mitana ny fampanantenana nomeny ny governemanta isaky ny manome toky azy ireo.
Nanampy ireo Kaargar fa :
… tamin'ny andro fahefatra nanaovana fitokonana sy nanaovana fihetsiketsehana, nanatevin-daharana ny mpiasan'ny Haft Tapeh ny mpiasa hafa sasany avy any amin'ny orinasa mpanodina siramamy Dezfoul izay very asa. Nihiaka ny mpiasa hoe ‘zonay tanteraka ny karamanay” (ny teny fanevan'ny governemanta Iraniana dia ny hoe ” zonay tanteraka ny mampiasa angovo nokleary’).
Nilaza ny Workers-1may fa nanambara tao anaty taratasy ny fanapahan-kevitr'izy ireo hanomboka fitokonana ny mpiasa rehetra miisa 5000 tao amin'ny Haft Tapeh tamin'ny 12 Septambra. Nilaza ny bilaogera fa nifampiraharaha tamin'ny manampahefana Iraniana ireo mpiasa tamin'ny farany volana, kanefa fampanantenana poakaty hatrany no azon'izy ireo. Nilaza ny bilaogy fa nandefa taratasy ho an'ny ILO (BIT) ihany koa ireo mpiasa .
Nanampy ny Kaargar fa nanafika mpiasa maro ny mpitandro ny filaminana ary nandratra ny 10 tamin'izy ireo. Nosamborina tany an-tranony ny mpiasa mpikatroka iray, Ferydoun Nikofard.
Nilaza ny Pejvakezendanyan (midika hoe ny feon'ny gadra) fa nanomboka nanery ireo mpiasa ny mpiasan'ny sampam-pitsikilovana Iraniana ary nandrahona azy ireo tamin'ny sazy henjana taorian'ny fitokonana roa andro. Nilaza ny bilaogy fa rehefa tsy nahazo karama sy norahonana ny mpiasa dia tonga ny fotoana tokony hidiran'ny Sampana Iraisam-pirenena momba ny Asa (ILO=BIT) an-tsehatra.
Mpiasa miaraka amin'ny rojo vy
Nampahafantatra anay ireo Kargaran (midika hoe mpiasa) fa tsy ny mpiasan'ny Haft Tapeh ihany no manana olana. Namoaka lahatsary avy amin'i Mahmoud Salehi ny bilaogy, nahitana mpiasa mpikatroka iray ao Kurdistan, izay any am-ponja. Naseho tao anaty lahatsary izy miaraka amin'ny rojo vy ao amin'ny hopitaly!